कोरोना संक्रमित पत्रकारको अनुभव : थुनुवा कोठामा जस्तै बसेका छौँ
कोरोना संक्रमित पत्रकारको अनुभव : थुनुवा कोठामा जस्तै बसेका छौँ कोभिड-१९ अस्पतालका आइसोलेसन : खोल च्यातिएको बेड, पानी चुहिने फिल्टर
सुजीतकुमार झा जनकपुर, ३ जेठ
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण बारेमा आम नागरिकलाई सत्य, तथ्य र निष्पक्ष सूचनाका माध्यमबाट सुसूचित पार्ने अभियानमा जुटेका पत्रकार आफैँ कोभिड-१९ बाट संक्रमित हुन थालेका छन् ।
प्रदेश-२ मा मात्रै ३ जना पत्रकार कोरोना संक्रमित रहेका छन् । संक्रमित हुनेमा जनकपुरधामका पत्रकार वीरेन्द्र रमण, नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका सभापति श्याम बन्जारा र अनलाइन खबरका पर्सा समाचारदाता सुरेश बिडारी रहेका छन् । वीरेन्द्रलाई प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाम तथा बन्जारा र बिडारीलाई नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा राखिएको छ ।
'बुधबार बिहान ८ बजेको समयमा घरमै एम्बुलेन्स पठाएर मलाई जनकपुरधाममा रहेको प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याएर आइसोलेसनमा राखिएको छ,' वीरेन्द्रले भने ।
सोही दिन बिहान नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका सभापति अनिल मिश्रले उनलाई फोन गरेर भने 'तपाईं घरबाहिर ननिस्किनु रे, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तपाईंको ट्रेसिङका बारेमा सोध्दै हुनुहुन्थ्यो' भनेका थिए । त्यसपछि नै वीरेन्द्र आफूलाई कोभिड-१९ संक्रमण भएको जानकारी पाएको बताए ।
मंगलबार दिउँसो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड-१९ संक्रमितको 'लिस्ट' सार्वजनिक गर्ने क्रममा वीरगन्जमा २ जना पत्रकारमा कोरोना संक्रमण देखिएको पुष्टि गरेको थियो भने मन्त्रालयले मंगलबारै राति १० बजेर १५ मिनेटमा सार्वजनिक गरेको अर्को लिस्टमा धनुषाका ४० वर्षीय अर्का व्यक्ति कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि गरेको थियो । त्यो व्यक्ति बिहान मात्रै सबैले थाहा पाए पत्रकार वीरेन्द्र रमण नै रहेका छन् । हुनत् १ जनाले मंगलबार राति पनि वीरेन्द्रलाई फोन गरेर यसबारेमा जनाउ दिएका थिए ।
निरन्तर धनुषा पत्रकार महासंघको अफिसमै बसेर काम गर्ने र समाचार संप्रेषण गर्ने काम गर्दै आएका पत्रकारका साथ अन्य २० जना र बाहिरी २ जनाले स्वेच्छिक स्वाबको नमुना परीक्षणका लागि पठाएका थिए । तीमध्ये पीसीआर परीक्षणमा १ जना पत्रकार र पत्रकार महासंघ धनुषा रहेकै भवनमा स्टेसनरी पसल गर्ने अर्का युवामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बुझिएको छ ।
'वैशाखको पहिलो सातातिर नेपाली सेनाले पनि स्वाब नमुना लिएर उको परीक्षण गरेको थियो, त्यति बेला रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो', उनले भने, ‘अहिले आफू मुटु रोगी भएकाले पनि स्वेच्छाले परीक्षण गराइहालौँ न त भनेर गराएको हो ।'
उनलाई कुनै कोरोना संक्रमणमा देखिने खालको ज्वरो, लामो समय सुख्खा खोकी लाग्ने केही देखिएको छैन । मुटुको औषधि खाएका कारण सामान्य ख्यासख्यास लाग्ने गरेको हो भनेर डाक्टरले भन्दै आएका थिए ।
डाक्टरसँग सल्लाह गर्दा उनले चेस्ट पनि क्लियर रहेकाले एनटीबायोटिक र एलर्जीको औषधि खानु भनेर खोकीको औषधि दिएको उनले बताए । औषधि खाएपछि खोकी पनि रोकिएको उनले सुनाए ।
'मुटुको रोगीले औषधि खाँदा सामान्य खोकी लाग्छ भनेर गंगालालका डाक्टरले जानकारी गराएका थिए । तीन दिन अघिबाट मात्र मैले औषधि खान सुरु गरेको हुँ' उनले भने, 'मैले खाँदै गरेको औषधिको फोटो खिचेर पठाएर डाक्टरलाई भेटी ब्लडप्रेसर पनि परीक्षण गराउँदा ठीकै थियो ।'
पत्रकारलाई समाचार सम्प्रेषणमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषामा समाचार लेख्न कम्प्युटर, नेटको व्यवस्था गरिएको छ । वर्षौंदेखि दर्जनौँ पत्रकार त्यही बसेर काम गर्दै आएका छन् । वीरेन्द्र पनि त्यहीबाट काम गर्थे ।
पर्साका पत्रकार सुरेश बिडारीलाई नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट मदन उपाध्यायले पहिलो चोटी जानकारी दिएका थिए । बिडारीका अनुसार उनले नै समाचारका लागि मेसु उपाध्यायलाई फोन गरेका थिए ।
'मंगलबार २ बजे फोन उठाउना साथ डा. उपाध्याले भने 'आज तपाईंले जे बोल्यो, त्यही समाचार हुने हुनेवाला छ ।' उहाँ मज्जाले मीठो हाँसो हाँस्नुभयो । कोभिड–१९ को रिपोर्टिङकै क्रममा उहाँसँग चिनजान भएको हो' उनले शिलापत्रसँगको कुराकानीका क्रममा भने ।
डा. उपाध्यायकै नेतृत्वमा नारायणी अस्पतालमा कोभिड-१९ विरुद्धको युद्ध सञ्चालनमा छ । प्रदेश २ मा नारायणीले आफ्नै प्रयासमा यो सेवा थालेको हो । अरूले पछि सहयोग गरेका हुन् ।
‘नयाँ संक्रमितहरू कहाँ–कहाँका रहेछन्, सर ?’ भन्दा उताबाट जवाफ आयो, ‘तपाईं तयार भएर छुट्टै बस्नुस, भित्र जानुपर्छ’ उनले फेरि भने, ‘तपाईं आइसोलेसनमा आउन तयार भएर बस्नुस, थप कुरा म बुझ्दैछु ।’
समाचार बन्न लायक सूचनाको लागि छटपटिरहेको बिडारीलाई सुरुमा विश्वासै भइरहेको थिएनन । 'बूढा जिस्कन पो थाले कि भन्ने लाग्न थाल्यो बिडारीले शिलापत्रलाई भने, 'तर, विषय जिस्कने खालको थिएन ।'
फोन बन्द गरेर यो कुरा उनले श्रीमती कल्पना र छोरा सुक्रिशलाई सुनाए । उनीहरूलाई पनि आश्चर्य लाग्यो । तर, ढाडस दिँदै कल्पनाले एकैक्षणमा भनिन्, ‘केही हुन्न बूढा, तपाईंलाई तातोपानी खुवाएरै ठीक पार्छु ।’
त्यसपछि बसेको घर, अफिस र नजिककालाई आफ्नोबारे जानकारी गराउँदै थिए, बाहिर हल्ला फैलिइसकेछ । धेरैतिरबाट तारन्तार फोन आएको बिडारीले बताए ।
'अधिकांशले मेरो मनोबल बढाउन खोजे । तातोपानी, बेसार पानी खान सल्लाह दिए । फोन उठाउन भ्याइनभ्याइ भएपछि फेसबुकमा म ठीकठाक छु भनेर लेख्दासम्म पनि झन् फोन आइरेको छ,' उनले सुनाए । अहिले उनलाई नारायणी अस्पतालको आइसलोसेन वार्डमा राखिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका सभापति श्याम बन्जाराले मंगलबार नै कोरोनासम्बन्धी जानकारी पाएका थिए । पर्साका १ जना पत्रकारलाई प्रहरीले कुटपिट गरेपछि आन्दोलनमै रहेको बेला थाहा पाएका थिए । उनी भन्छन् 'हामी जंग जित्ने छौँ ।'
सोही दिन आइसोलेसन बार्डमा गएपछि सामाजिक सञ्जालमा एउटा पोष्ट पनि लेखेका छन्, 'कोरोना भाइरसको कारण जटिल समस्या आएकोले पर्साको सबै पत्रकारहरूले स्वाब टेस्ट गराउनु होला । रिपोर्ट नाआउन्जेल बजारमा न निस्कनु होला । लकडाउनको पालना गर्नु होला । यो नै पत्रकारिता, घर, परिवार, देश र जनताकोलागि यतिबेला सहयोग हुनेछ ।'
पत्रकारलाई कोरोनाले छोएपछि दर्जनौँ पत्रकार चिन्तित देखिएका छन् । कम सुविधामा स्थलगत रिपोटिङ गर्नु गाह्रो रहेको पत्रकारहरू बताउँछन् ।
अव्यवस्थित आइसोलेसन बार्ड
प्रदेश २ मा जनकपुरधाम र वीरगञ्जमा कोरोनाका रोगीलाई राखिएको छ । सरकारले कोरोना संक्रमितका लागि अस्पतालमा सबै व्यवस्था राम्रो बताए पनि स्वास्थ्यकर्मीसँग भेट नहुने गरेको वीरेन्द्र बताउँछन् ।
‘एकजना कर्मचारीले सामाजिक दूरी कायम गरी दाल, भात, तरकारी दिन आउनु भयो' वीरेन्द्र भन्छन् 'पिउने पानीको समस्या रहेछ । पानीका लागि चिनेजानेको साथीलाई गुहार्नुपर्‍यो ।'
'यहाँ न अस्पतालको वातावरण छ र कुनै बेड नै छ, बस्न पनि अत्यन्तै गाह्रो छ । म मुटुको औषधि खाइरहेको एउटा बिरामी थुनुवा कोठामा जस्तै बसेको छु’, वीरेन्द्रले भने ।
पत्रकार बिडारीको पनि यस्तै पीडा रहेको छ । 'फिल्टरमा पानी हालेको, चुहिने रहेछ । केही पर खाली रहेको वार्डको फिल्टर ल्याएर हेर्‍यौँ, त्यो पनि चुहिने रहेछ । फिल्टर गरेर पानी खान नसकिने निश्चित भएपछि हार खाएर बस्यौँ' उनले भने, 'खोल च्यातिएर नाङ्गिन लागको मेरो बेड चाहिँ कोठाबाट ल्याएको तन्ना हालेपछि गजबको देखियो ।'
बेडसँगै झुल, नुहाउने, लुगा धुने साबुन, टुथ पेस्ट, ब्रसलगायत व्यक्तिगत सरसफाइका सामानहरू थिए । खाना पनि मीठो नरहेको सुनाए ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ३, २०७७, १२:००:००
२ साता क्वारेन्टाइनमा बसेर घर फर्किएका युवकको मृत्यु
सप्तरीको छिन्नमस्तामा जग्गा विवादमा झडप, ८ राउण्ड अश्रुग्यास प्रहार